Ogaden News Agency (ONA) – Isku-dayga boobka khayraad Ogadenia & guul darada Ethiopia – Resolve Ogaden Coalition
Isku-dayga boobka khayraad Ogadenia & guul darada Ethiopia – Resolve Ogaden Coalition
Posted by ONA Admin	/ August 3, 2012
Muddo sannad kudhow kadib markii ay ku guul dareysteen shirkadaha shisheeye ee u soo badheedhay boobka shidaalka iyo saliida dhulka Soomaalida Ogadenia, ayaa waxaa guuldaradaa kusoo biiray shirkadda shidaalka ee Petro-trans oo laga leeyahay dalka China.
Horaantii todobaadkan ayaa wasiirka macdanta ee dalka Ethiopia shaaca kaqaaday in dawladiisu ay dib uga noqotay heshiiskii ay lagaleen shirkadda Petro-trans, kadib markii laga waayey maalgashi si ay u qodaan shidaalka Ogadenia.
Dhulka Soomaalida Ogadenia ayaa muddo qarni ku dhaw kujira gumeysiga dawladda Ethiopia, iyada oo xasuuqa iyo gumaadka shacabkuna ay joogto tahay. Isla markaana noqotay meesha kali ah ee aduunka laga mamnuucay saxaafadda xorta ah, hay’adaha samafalka iyo kuwa aan dawliga ahaynba. Sidaa awgeed lama yaabeyno guul darada shirkadaha shisheeye ay kala kulmaan qodida shidaalka Ogadenia.
Balse waxaa wax laga xishooda ah in dawladda Ethiopia ay wali kusii indha adag tahay, walina ka gadayso shirkadaha shisheeye beenta ah in si dhib yar lagu soo saari karo shidaalka Ogadenia. Waxaa marnaba aan la’iska indha tiri karin xasuuqa dawladda Ethiopia ka waddo dulka Ogadenia. Iyada oo hay’adaha xuquuqul insaanka sida hay’adda Human Rights Watch ay kasoo saareen qoraalo aad u farabadan oo ka turjumaya xasuuqa ba’an ee Ethiopia ku heyso shacabka Ogadenia sida xidh-xidhitaanka, jidh-dilka, kufsiga, dhaca iyo waliba gubidda guryaha shacabka. Waxaana sawiro caddaymo ah kasoo saaray hay’adda American Association for the Advancement of Science (AAAS).
Waxaa intaa dheer iyada oo dawladda Ethiopia hubeysay kooxo maleyshiyaad ah kuwaas oo si toos ah uga amar qaata ciidankeeda, isla markaana loogu tala galay iney shacabka xasilooni darro ku abuuraan. Maleyshiyaadkan ayaa waxaa kamid ah kuwa loo yaqaano “Liyu Police” ka oo ku caan baxay boobka, dilka, qafaalka iyo gubidda guryaha shacabka. Waxay hay’adaha xuquuqul insaanku kooxdan barbar dhigaan maleyshiyaadka naxariista darnaa ee Janjaweedka, kuwaas oo xasuuq ba’an ka geystay Darfur.
Haddaba iyadda oo shirkadaha shidaalku ay og’yihiin xaaladda Ogadenia iyo xasuuqa ka socda, marar badana loo sheegay, ayey wali kusii indha’adag yihiin iyaga oo had iyo jeer heshiis lagala dawlada Ethiopia. Todobaadkii lasoo dhaafay ayaa shirkadda shidaalka ee Petra Energia oo laga leeyahay dalka Brazil ay u gudbisay dawladda Ethiopia warqad heshiis, kaasoo ay ku dooneyso shidaal baadhista dhulka Ogadenia.
Sidaa daraadeed Resolve Ogaden Coalition waxay baaq udireysaa shirkadda Petra Energia iyo shirkadaha kale ee shidaalka iney ka tanaazulaan dhamaan baadhista shidaalka dhulka Ogadenia waayo waxay taasi ka dhigan tahay ka qayb-qaadashada xasuuqa Ogadenia.
Ugu dambayn waxaa lagama maarmaan ah in dhamaan shirkadaha shidaalka iyo kuwa maal gashigaba ay joojiyaan hawlahooda ilaa inta xal looga helayo shacabka Ogadenia.
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia (ONLF) oo ah hormuudka halganka Ogadenia ayaa marar farabadan gaadhsiiyey isla markaana u digay hay’adaha shidaalka ineysan raali ka ahayn baadhista shidaalka iyo kheyraadka Ogadenia ilaa xal loo helo shacabiga Ogadenia iyo aaya ka tashigooda.
Shacbiga Soomaalida Ogadenia iyo Resolve Ogaden Coalition waxay sibuuxda u taageerayaan, una garab istaagayaan go’aanka Jabhadda Waddaniga Xorynta Ogadenia ee ku saabsan baadhista kheyraadka Ogadenia.
Hoggaanka Arrimaha Dibadda